Xaalada caafimaad ee Boqorka Norway oo soo fiicnaatay. - NorSom News
Xaalada caafimaad ee Boqorka Norway oo soo fiicnaatay.
Foto: Royal Family Norway
Boqorka Norway Kong Harald ayaa wali jiifa isbitaalka la dhigay maalmo kahor, sida lagu xaqiijiyay war kasoo baxay aqalka boqortooyada Norway.
Dhaxalsugaha boqortooyada Norway, Kronprins Haakon ayaa maanta sheegay in xaalada boqorka ay soo fiicnaatay, laguna wado in isbuucan uu isbitaalka kasoo baxo. Dhaxalsugaha ayaa isbuucan la wareegay shaqooyinkii maalinlaha ahaa iyo balamihii uu caadi ahaan boqorku qaban jiray.
Boqorka Norway oo 82 sano jir ah ayaa ah mid aad looga qadariyo, sumcad weyna ku dhex leh bulshada Norway.
Xigasho/kilde: Kronprins Haakon: – Kongen er i bedring
Previous article21-jirkan ayaa Oslo jimcihii lagu dilay.
Next articleNorway oo soo qaadeyso Hooyo Daacish ku biirtay iyo ilmaheeda oo xanuunsan.